Isgaarsiinta Xianglong-waa lamaane lama huraan u ah soosaarayaasha xarumaha is-adeegga-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Xianglong Isgaarsiinta - lamaane lama huraan u ah soo saarayaasha xarumaha is-adeegga
Waqtiga: 2021-03-20 Hits: 6
Horumarka dhaqaalaha, mashiinnada wax lagu iibiyo ayaa ka soo muuqday waddooyinka iyo luuqyada; iibsashada tigidhada is-adeegga iyo tikidhada tikidhada ayaa sidoo kale caan ka noqday nidaamyada gaadiidka sida garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada; isbitaalada, bangiyada, hoolalka dowlada iyo hay'ado kale ayaa sidoo kale faafinaaya qalab kala duwan oo is-adeegsi ah, kaasoo si weyn u fududeeya heerarka nolosha dadka isla markaana hagaajiya waxtarka shaqada.
Gawaarida is-adeegsiga ayaa aad u badan maalmahan, iyo is-gaarsiinta is-dhaafsiga ee bangiyada waaweyn ayaa laga heli karaa meel kasta, iyo hannaanka hawlgalka ee is-goysyadan is-adeegsiga asal ahaan waa isku mid. Waa maxay sababta isla sababtu? U ogolow's sahamiyaan it si sax ah.
Waa la arki karaa in asal ahaan dhamaan teebabka kiimikada ay isku mid yihiin. Sababta tani waxay tahay in kumbuyuutarka furaha uu xoog iyo wax ku ool yahay, fududahay in la shaqeeyo, isla markaana sir karo macluumaadka, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa boosteejooyinka waaweyn ee is-adeegga.
Marka hore, si kooban u soo bandhig sharaxaadda shaqada ee kumbuyuutarka mashiinka is-u adeegsiga. Lambarada kumbuyuutarka waxaa loo isticmaalaa gelitaan, hawlgalka hadda socda waa la joojinayaa markii la riixayo Esc. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dhigto laakiin riix si aad uga laabato, ka dib riix jooji si aad u joojiso hawlgalka, GELI Furaha ayaa matalaya furaha xaqiijinta. Intaa waxaa sii dheer, shaqada badhan kasta ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda, waxaana jiri doona dardar-celin u dhiganta tallaabo kasta oo hawlgal ah, taas oo hubinaysa fududaanta kumbuyuutarka daaqada.
Qalab aad u tiro badan oo is-adeegsi ah oo is-adeegsi ah ayaa soo galay goobteenna aragtida, meelo badanna sida garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareennada, boosteejooyinka basaska, isbitaalada, jaamacadaha, bangiyada, hoolalka adeegga dawladda, dukaamada waaweyn, xarumaha laga dukaamaysto, iwm.
Maaddaama ay tahay soo saaraha caanka ah ee gudaha ee teebabka warshadaha, alaabooyinka isgaarsiinta ee Xianglong waxay daboolaan warbaahinta, ganacsiga, amniga, waxbarashada, cunnada, caafimaadka iyo qaybaha kale. Xianglong Isgaarsiinta ayaa isku dhafan awoodaha xal ka naqshadeynta wax soo saarka, horumarinta caaryada, processing wax taaj oo kale duray, jediyay sheet processing birta, processing labaad farsamo farsamo, shirkii iyo iibka. Waxay leedahay 8 horumariyayaal waqti-buuxa ah waxayna si deg-deg ah u habeyn kartaa moodooyinka kala duwan ee aan caadiga ahayn ee macaamiisha. Qabso, kiiboodh iyo fargeeto sudhan Xianglong Isgaarsiinta ayaa si isdaba joog ah u gudubtay shahaadada CE iyo shahaadada ISO9001. Nidaamka xakamaynta tayada adag wuxuu hubiyaa kalsoonida alaabada, iyo nidaamka cilmi baarista iyo horumarka wuxuu dammaanad qaadayaa hal-abuurnimada joogtada ah ee alaabada. Si macaamiisha loo siiyo badeecado iyo adeegyo ka sii wanaagsan, Isgaarsiinta Xianglong waxay sii wadaa ballaarinta iyo hagaajinta kanaallada suuqgeynta, waxayna sameysay shabakad adeeg kanaal suuqgeyn ku leh warshadaha.
Hore: Suuqa Nidaamyada Taleefannada Dabka
Xiga: Sidee Mashiinnada Faa'iido u Faafayay